Apple waxaa laga yaabaa inay soo saarto Qalab Caafimaad Fasalka II ee Cusub | Waxaan ka imid mac
Apple waxaa laga yaabaa inay soo saarto Aaladda Caafimaadka Heerka II ee Cusub
MyHealthyApple wuxuu helay liis la filayo in Apple ay ku soo saarto a qalab caafimaad oo heerka II ah. Runtii ma cadda inay tahay sii -deyn gooni ah ama waxay u noqon kartaa astaamaha Apple Watch ama aaladaha kale ee jira. Heerka II waxaa loola jeedaa aaladaha u keenaya isticmaaleha khatar dhexdhexaad ah ilaa heer sare ah.
Liiskii shaqo ee dhowaan, shirkadda Maraykanku waxay sheegaysaa inay raadinayso maareeye mashruuc oo mas'uul ka ah taageerada sharciyeynta soo -bandhigidda badeecadaha, oggolaanshaha, iyo u -diyaargarowga bilowga suurtagalka ah. Markaa ugu yaraan MyHealthApple ayaa soo qaaday galitaanka blog -kaaga dhijitaalka ah. Maareeyaha mashruucani wuxuu ka shaqayn doonaa qaybta qalabka ee shirkadda. Taasi waxay soo jeedinaysaa inay jiri karto wax soo saarka caafimaadka ee Heerka II mustaqbalka ama muuqaalka caafimaadka ee Apple Watch.
Aaladaha caafimaadka ee Heerka II waa kuwa, sidaan hore u sheegnay, u siiya isticmaalaha halis dhexdhexaad ah ama sare. Tusaale ahaan, isaga electrocardiogram (ECG) ee Apple Watch iyo hawlaha garaaca wadnaha oo aan joogto ahayn ayaa ku qoran aaggaas. In kasta oo aysan ahayn in la walwalo ama laga naxo, tan Ku dhawaad ​​kalabar qalabka caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa ku qoran liiskaas magacaas.
Ma noqon karnaa hawl cusub oo Apple Watch ah? Aad bay suurtogal u tahay maxaa yeelay dabcan saacadda Apple waxay aad uga badan tahay aalad lagu sheego waqtiga ama la helo farriimaha. Waxaan xusuustaa xanta aad loo hadal hayo dareeraha gulukooska. Dhab ahaantii, waxaa mar horeba la siiyay wax dhab ah waxaana laga yaabaa in iyadoo ku dhawaaqista shaqadan la xaqiijinayo jiritaanka dareerahaas cusub. Sida had iyo jeer marka aan ka hadalno xanta, waa inaan sugnaa oo waan la socon doonaa waxa dhici doona in laguu sheego.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxaa laga yaabaa inay soo saarto Aaladda Caafimaadka Heerka II ee Cusub
Mark Gurman wuxuu sharxayaa "waqtiga" la filayo inuu soo afjaro kala -guurka Apple Silicon